MW Xasan oo la kulmay qeyb ka mid ah haraadigii Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
MW Xasan oo la kulmay qeyb ka mid ah haraadigii Farmaajo
Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay inta badan danjireyaasha Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka, kuwaas oo u badan shaqsiyaad xilalka ku helay naas-nuujin siyaasadeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah danjireyaasha Soomaaliya u fadhiya dalalka caalamka, kuwaas oo intooda badan Magacaabis Siyaasadeed ku helay xilalka intii uu Maxamed Farmaajo ka arriminayay dalka shantii sano ee la dhaafay.
Danjireyaasha ayaa Madaxweynaha warbixin ka siiyey xaaladaha ay ku shaqeeyaan Safaaradaha Soomaaliya ee dibadda iyo Jaaliyadaha ku dhaqan daafaha caalamka, Xasan Sheekh ayaana ku adkeeyay in ay sida ugu wanaagsan ugu adeegaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan waddamada ay DF wakiilka uga yihiin.
Sida la rumeysan yahay in badan danjirayaashaan ayaa waayi doona xilalkooda bilaha soo aaddan, maadaama magacaabiddooda markii hore aheyd mid siyaasadeed oo aanu aheyn Xirfad Diblomaasiyadeed oo lagu xushay, waxaana danjirayaasha la raacdeynayo ugu horreyn kara safiirrada Dooxa, Nairobi iyo Cape Town.
Inta badan Danjirayaashu, waxa ay Madaxweynihii hore Farmaajo iyo Wasiirkii Arrimaha Dibadda, Cabdisiciid, kala shaqeeyeen daabulidda shaqaalihii xaafiika Farmaajo, gaar ahaan kuwii ku heybta ahaa, kuwaas oo bilihii la soo dhaafay lagu kala qoray safaarado dibadda ah, gaar ahaan safaaradaha dalalka waaweyn ee Yurub, iyo Mareykanka.
Waxaa kulanka goob-joog ahaa, Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda XFS, Balal Maxamed Cismaan, oo hadda ah shaqsiga ugu sarreeya Wasaaradda, maadaama shaqo joojin lagu sameeyay Cabdisiciid Muuse oo baaritaanno ku sucdaan, loona heysto inuu qeyb ka yahay qowleysatada xaalufinta ba’an ku heysa dhirta Soomaaliya.
Farmaajo, ayaa intii uu xaafiiska joogay hirgaliyay naas-nuujin iyo nin-tooxsi middii ugu weyneyd ee Madaxweyne Soomaaliyeed sameeyo taariikhda, Kadib Siyaad Barre, wuxuuna xilalkii ugu badnaa ee diblumaasiyadeed qaab sharci darro ah ugu magacaabay dad ku heyb ah, isagoo si daran ugu tuntay awood qeybsiga 4.5.
Farmaajo markii uu Aminga iyo Hoggaanka Doorashooyinka si dadban ugu wareejiyay RW Rooble bartamihii 2021, wuxuu u qalab qaatay siduu saameyn xooggan ugu yeelan lahaa Safaaradaha Soomaaliya, wuxuuna baddelay in ka badan 15 safiir oo ka soo jeeda beelaha Hawiye, Dir iyo Raxanweyn, isagoo ku baddelay danjirayaal u dhashay Daarood.